दशैं नजिकियाे, हलमा फिल्म कहिले ? दशैं नजिकियाे, हलमा फिल्म कहिले ? Canada Nepal
काठमाडौं । सरकारले फिल्म हल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको तीन साता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म हलमा कुनै फिल्म प्रदर्शन हुनसकेको छैन । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण दोस्रो पटक १६ वैशाखदेखि जारी निषेधाज्ञा भदौ दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा धेरै हदसम्म खुला भइसकेको थियो । तर, कुनै निर्माता पनि फिल्म प्रदर्शन गर्न तम्सिएनन् ।
आश्विन ४, २०७८ सोमवार १६:५२:०१ बजे : प्रकाशित